ဗိုလ်ချုပ်ကျီးမင်းအောင်လှိုင်အရာကျခြင်း shuffle | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဗိုလ်ချုပ်ကျီးမင်းအောင်လှိုင်အရာကျခြင်း shuffle
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 4, 2012 in Aha! Jokes, Satire |6comments
ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ဂျိုမဟုတ်လို့ အပျိုတအုပ်နဲ့ နေရဒယ်...
ဗိုလ်ချုပ်ကျီးမင်းအောင်လှိုင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးဂျီး ရာထူးတိုးသည့်အပြင် သရေစည်သူဘွဲ့ပါ ထပ်မံချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသဖြင့် အလွန်ပျော်နေသည်။ အဘဂျီး၊ အဘလေး တို့နှစ်ဦးအား ကျေးဇူးတင်ထိုက်ကြောင်း အနီးကပ် စောင့်ကြည့် သတင်းပို့နေဂျသူ ထောက်လှမ်းရေးများကြားအောင် နှုတ်မှတဖွဖွ ရွတ်ဆိုနေသည်။ သို့သော် ထိုအပျော် ကြာကြာမခံလိုက်ရ… သူ၏အထက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးဂျီး အသစ်တဦး ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း စစ်ရုံးချုပ်ထက်မြင့်သည့် ညစ်ရုံးဂျုပ်မှ အဘဂျီးအမိန့် ထွက်လာမှ ရာထူးတက်သလိုနှင့် အရာကျသွားကြောင်း သိရသည်။ သူ့အထက်တွင် ရောက်လာသူကား မိုးကျရွှေကိုယ် ကကြောင်ကြီးဖြစ်၏။ အဘ ဗိုလ်ချုပ်မှူးဂျီးနှင့် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးဂျီးတို့ကတော့ တဆင့်ပိုမြင့်သော ဗိုလ်ချုပ်ဂျုပ်ကျီးနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ဂျုပ်ကျီး ဖြစ်သွားသည်။ နဂို နံပါတ်သုံးအဆင့်မှ ရာထူးတိုးသည်တွင် နံပါတ်လေးနေရာသို့ ရောက်သွားရရှာသည်။ ဂတုံးပေါ်ထိပ်ကွက် ခံရခြင်းပေတည်း..။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးဂျီး မိုးကျရွှေကိုယ် ကကြောင်ကြီးဆိုသူမှာ အသူနည်း။ စစ်တက္ကသိုလ် မည်သည့်အပတ်စဉ်နည်း၊ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေဂျ၏။ များမကြာခင် ဗိုလ်ဂျုပ်ကကြောင်ကြီးအား ဗိုလ်ဂျုပ်မင်းအောင်လှိုင် ရထားသော သရေစည်သူဘွဲ့ထက် ပိုသာသည့် သွားရည်တမြားမြားဘွဲ့ ချီးမြှင့်ရာ “သွားရည်တမြားမြား မိုးကျရွှေကိုယ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးဂျီး ကကြောင်ကြီး” ဖြစ်သွားသည်။ စာလုံးရေ ၁၂လုံးရှိ၍ စက်နှလုံးဟုလည်း တင်စားခေါ်ဂျသည်။ ကျောသားရင်သား မခွဲဂျား၊ မျက်နှာမလိုက်၊ စည်းကမ်းတိကျသူ စက်နှလုံးသားပိုင်ရှင် အဓိပ္ပါယ် ရလေသည်။ မနာလိုသူများဂမူ “တံတွေးမနိုင်သူ ငကြောင်” ထောပနာပြုဂျသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တပ်မတော်အတွက် ဦးစီးပဲ့ကိုင်အသစ် ပေါ်ထွန်းလာဘေဗျီ…။
စက်နှလုံး ဗိုလ်ဂျုပ်ကကြောင်ကြီးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝက်စ်ပွိုင့်စစ်တက္ကသိုလ်တွင် ဝက်မွေးမြူရေး အထူးပြု ဘာသာရပ် တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သည်။ သူနှင့် အပတ်စဉ်တူ ကျောင်းနေဖက်ကား ဝက်သားဟင်းချက်နည်း အထူးပြုဘာသာရပ် ယူထားသူ အမေရိကန်လေတပ် ဗိုလ်ဂျုပ်သဂျီးစ် (အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ဖြင့်ဖတ်) ဖြစ်သည်။ သဂျီးစ်သည် မြန်မာလူမျိုးအစစ် ဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန်တွင်ကြီးပြင်း၍ အမေရိကန်ဆိတ် လုံးလုံးဝင်ကာ အော်လျင်ပင် ပဲ..ဟဲ..ဟဲ မမြည်ဘဲ ဘဲ..ဟဲစ်…ဟဲစ် ဟုအသံထွက်သည်။ ကြောင်ကြီးအပေါ်ကား လွန်စွာ ကောင်းပေသည်။ ပိုက်ဆံလိုလျင်ချေး၏၊ သွားဂျင်သည့်နေရာများအား လိုက်ပို့၏။ တိုက်ခန်းအတူငှားနေဂျ၏။ ညီရင်းအကိုပမာတည်း။ မသိလျင် ကကြောင်ကြီးအား အနီးကပ်ထောက်လှမ်း မှတ်တမ်းယူနေသည်ဟုပင် ထင်ရ၏။ ကကြောင်ကြီးကလည်း လွန်စွာအားကိုး၏။ သူ့ကိုယ်ရေး အချက်အလက် ခံဇားဂျက်များကို မချွင်း မချန် သဂျီးစ်အား ပြောပြ၏။ အချိန်တန် သင်တန်းပြီးဆုံး၍ ကိုယ့်နေရပ် ကိုယ်ပြန်ဂျသည့်အခါ ကြောင်ကြီးအား အဘဂျီးမှ ကိုယ်ပျောက်စစ်ဌာနချုပ်မှူးကျီးအဖြစ် ခန့်အပ်၍ မမြင်ကွယ်ရာမှ စစ်ရေးစစ်ရာများကို စီမံစေသည်။ ထို့ကြောင့် ကကြောင်ကြီးအား ထိပ်ဆုံးအဘနှစ်ဦးမှလွဲ၍ မည်သူမှ မသိချေ။ အမှန်တော့ အဘဂျီးဂိုး တရုတ် သိုင်းကား စိတ်အေးလက်အေး ညစဉ်ကြည့် အပန်းဖြေနိုင်ရန်၊ အဘလေးမူး ဘီလူးလေဘယ်လ်သောက် ဇက်ရက်မင်းစည်းစိမ် ခံစားနိုင်စေရန် နောက်ကွယ်မှ အသက်စွန့် အမှုထမ်းရွက်ပေးသူကား ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အမေရိကန်စစ်တက္ကသိုလ်ထွက် ကကြောင်ကြီးဖြစ်သည်။
ကကြောင်ကြီး၏ အမြော်အမြင်ရှိမှုအပြင် အင်္ဂလိပ်စကားကို ခရားရေလွှတ် ပြောနိုင်မှုအား အဘဂျီး၊လေးတို့မှ လွန်စွာ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်ကြသည်။ ကကြောင်ကြီး သူတို့ရှေ့တွင် သတိစစ်ပုံစံ အပြည့်ဆွဲ၍ ပြောဆိုသော ဘလက်ဒီဖူးလ်၊ ဂိုးတူဟဲလ်၊ ဖက်ခ်ယူ၊ အက်စ်ဟိုးလ် ဆိုသော သိုးဆောင်းစကားများကို ကြားသည့်အခါ ဗဲဒီးဂွတ် ဗဲဒီးဂွတ်နှင့် တပြုံးပြုံးဖြစ်ကြ၏။ ကကြောင်ကြီးမှ ရံဖန်ရံခါ လက်ခလယ်ထောင်ပြသောအခါ ၎င်းတို့မှ အမိန့်သံအပြည့်ဖြင့် ဆက်လုပ်ဟု ပြောဂျ၏။ အောက်စဖို့စ်တက္ကသိုလ်ဆင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်္ဂလိပ်စကား ဖက်ပြိုင်ပြောနိုင်သူတယောက် ငါတို့ရထားပြီဟု ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကုန်ဂျ၏။ ဤသည်ကား ထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ဂျုပ်သုံးဦးတို့၏ အတွင်းစည်း ဆက်ဆံရေးပေတည်း။
ကကြောင်ကြီး သတင်းကြားသည့်အခါ လေတပ်တွင် လေယာဉ်မောင်းခွင့် မရှိတော့ဘဲ လေသူရဲများအား ဝက်သားချက်နည်းသင်တန်း ပို့ချနေရသူ သဂျီးစ်လက်ခမောင်း ခတ်လေသည်။ သူ့အား အမေရိကန်အစိုးရမှ လိုပြီမဟုတ်ပါလော။ မှန်၏..ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် စီအိုင်အေထောက်လှမ်းရေးမှ Brown Sharp Fry ဆိုသူ စွဲမက်ဖွယ် ကော့ကေးရှန်းအနွယ်ဝင် အမျိုးသမီးတဦး ဆက်သွယ်လာသည်။ သဂျီးမှ သူ့အား ညိုထက်ကျော်ဟု မြန်မာမှုပြုသည်။ (မှတ်ချက်။ ရွှေရောင်ဆံပင်၊ မျက်လုံးပြာ၊ အရပ်ခြောက်ပေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် တရာ့နှစ်ဆယ်၊ အတိုင်းအထွာ မော်ဒယ်ဂဲလ်တမျှ။ ) သဂျီးစ်အဖို့ စုတ်ရောလာဘ်ပါ ဝင်လေဗျီ။ ယူမည့်သူမဲ့ လဗျိုကျီး ဘဝမှ နေ့စဉ် ညိုလေးနှင့် နဖူးတိုက်ဒူးတိုက် ဆွေးနွေးရလေသည်။ အစီအစဉ်အရ သဂျီးစ်အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စစ်သံမှူးခန့်ပြီး ဗိုလ်ဂျုပ်ကကြောင်ကြီးနှင့် လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းဖောက်ရန် ဖြစ်သည်။
သဂျီးစ် မျှော့တွယ်သလို မခွာတမ်း ကပ်နေသည်ကို ရိပ်စားမိသော ဒေါ်ညိုထက်ကျော်တယောက် အမြန်ခွာရန် ဆိုင်းပြင်းသော်လည်းမရ နောက်ကျသွားလေ၏။ အခွင့်ရေးသမား သဂျီးစ်မှ မြန်မာပြည်သို့ တယောက်ထဲ မသွားရဲဂျောင်း၊ မြန်မာပြည်အကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင်သိသူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦး လိုအပ်ဂျောင်း၊ ဒေါ်စုနှင့်ပါ ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးဖြစ်မှ အောင်မြင်မည်ဖြစ်ဂျောင်း၊ တောင်းဆိုချက် မရလျင် မလုပ်နိုင်ဂျောင်း အကြပ်ကိုင်လေရာ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီတွင် မြန်မာ့အရေးသည် မဖြစ်မနေ ဦးစားပေး ဖြစ်နေသောကြောင့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား၊ သမ္မတကတော် မီရှဲလ်အိုဘားမားတို့၏ အသနားခံ တောင်းပန်မှုဖြင့် ဒေါ်ညိုထက်ကျော်မှ သူချစ်သော အမိအမေရိကန်နိုင်ငံတော်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံရန် သဘောတူ ရလေတော့သည်။
အမေရိကန်ယန်းကီးများ၏ အကြံအစည် အထမြောက် အောင်မြင်မည်လော၊ သဂျီးစ်နှင့် ကကြောင်ကြီးတို့၏ ကစားပွဲ အဖြေမည်သို့ထွက်မည်နည်း..… ဇာတ်သိမ်းပိုင်း…. မျှော်…။
ဦးကြောင်ကြီးကလည်း စတိုင်တစ်မျိုးနဲ့ရေးနေပြန်သဟ ကြောင်တွေ ခေါင်းကောင်းနေကြတယ်တော့ ……
သဂျီး မိန်းမယူတာ ဒီလောက် အရေးပါမှန်း မသိခဲ့ရိုး အမှန်..
စကားမစပ် ..သဂျီးက ကိုကိုကြောင်ကို မိန်းမယူဖို့ပြောတုန်းက
ဘာတဲ့ ပြန်လာရင် အခန်းထဲ မီးမှောင်မှောင် ဖွင့်ပြီးဝင်ရတာ
စိတ်နာလို့ ယူတာ ဆို…
သဂျီးစ် နဲ့ဘာဆက်ဖြစ်မတုန်း ဆက်ကြည့်ရေသေးတာပါ့စ်
ဒုတိယကသွားရည်စည်သူဆိုလို့ ပထမသွားရည်တမျှားမျှားက ဘယ်သူပါလိမ့်လို့
လုပ်ထားဦးကြောင် အားပေးနေတယ်၊ ပြီးလျင် ပါမစ်လေး ဘာလေးချပေးဘို့ မမေ့နဲ့ဦး။
၀က်သားဟင်းချက်နည်းအထူးပြု သဂျီးမင်းရဲ့ မြည်းချင်သလို အမြည်းခံရတော့မဲ့.
ဦးကြောင်ကို လက်ခလယ်ထောင်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်.(တပ်ဂျုပ်ကြီးကိုပြသလိုပဲ)